Wireframing maimaim-poana sy mora amin'ny Wireframe.cc | Martech Zone
Angamba tokony hanomboka amin'izay tariby tariby isika! wireframing dia fitaovana iray hamoronan'ny mpamorona endrika haingana ny rafitry ny taolana amin'ny pejy iray. Wireframes dia mampiseho ireo zavatra eo amin'ny pejy sy ny fifandraisan'izy ireo, tsy mampiseho ny endrika sary namboarina. Raha tena te hampifaly ny mpamorona anao ianao dia omeo tariby taratasinao araka ny fangatahanao izy ireo!
Mampiasa ny zava-drehetra ny vahoaka manomboka amin'ny penina sy taratasy, hatramin'ny Microsoft Word, ka Fampiharana mandroso miaraka amin'ny wireframing hamolavola sy hizarana ny tariby tariby. Mitady fitaovana tsara foana izahay ary toa ny mpamorona anay, Stephen Coley, nahita kely faran'izay kely ary maimaim-poana ampiasaina - Wiresframe.cc
Wireframe.cc dia manana ireto fiasa manaraka ireto
Tsindrio ary sintomina hanoratanao sary - Tsy mora kokoa ny mamorona singa amin'ny fefy tariby. Ny sisa ataonao dia ny manoritra mahitsizoro amin'ny canvas ary safidio ny karazana stencil izay hapetraka ao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fisintomana ny totozy hiampita lamba sy ny fisafidianana safidy iray amin'ny menio pop-up. Raha mila manitsy na inona na inona ianao dia tsindrio indroa izany.
Fifanarahana Super-minimal - Raha tokony ho fitaovana sy sary mihetsika tsy tambo isaina izay fantatsika rehetra avy amin'ny fitaovana sy rindrambaiko hafa Wireframe.cc dia manolotra tontolo tsy misy korontana. Afaka mifantoka amin'ny hevitrao ianao izao ary manaova sary azy mora foana alohan'ny hanjavonany.
Ataovy mora foana ny fanamarihana - Raha te hanana antoka ianao fa mandalo ny hafatrao dia afaka manome hevitra momba ny fefy taribyo foana ianao. Ny fanamarihana dia noforonina tamin'ny fomba hafa rehetra amin'ny canvas ary azo alefa sy hovonoina izy ireo.
Palety voafetra - Raha tianao ho madio sy mazava ny tariby tariby dia tokony ho tsotra foana ianao. Wireframe.cc dia afaka manampy anao hanatratra izany amin'ny alàlan'ny fanolorana paleta safidy voafetra. Izany dia mihatra amin'ny paleta loko sy ny isan'ny stencil azonao isafidianana. Amin'izany fomba izany ny votoatin'ny hevitrao dia tsy ho very amin'ny haingon-trano tsy ilaina sy ny endrika lamaody. Raha tokony ho izany dia hahazo tariby tariby miaraka amin'ny hazavan'ny sary an-tànana ianao.
Soso-kevitra marani-tsaina - Wiresframe.cc dia manandrana maminavina izay kasainao hatao sary. Raha nanomboka nanao sary elanelana sy manify ianao dia azo inoana fa lohateny lehibe io fa tsy tsipika boribory na boribory. Noho izany, ny menan'ny pop-up dia tsy misy afa-tsy ireo kisary amin'ireo singa afaka maka an'io endrika io. Toy izany koa ny fanovana - safidy tokana azo ampiharina amin'ny singa iray no aseho anao. Midika izany fa kisary hafa ao anaty bara fanovana ho an'ny fanovana fehintsoratra iray ary hafa ho an'ny mahitsizoro tsotra.
Tranonkala Wiresframe sy fampiharana finday - Afaka misafidy modely roa ianao: fikandrana fitetezana ary finday. Ny kinova finday dia tonga amin'ny fironana mitsangana sy mivelatra. Raha hifamadika eo anelanelan'ny modely dia azonao atao ny mampiasa ny kisary eo amin'ny zoro havia ambony na manova ny habeny amin'ny lamba mitazona ny zoro amin'ny zorony havanana ambany.
Mora ny mizara sy manova - Ny fefy tariby tsirairay izay tahirizinao dia mahazo URL tokana izay azonao zahana na zarao. Ho afaka hanohy hiasa amin'ny volavolanao ianao amin'ny fotoana ho avy. Ny singa rehetra amin'ny fefy tariby dia azo ovaina na ovaina ho zavatra hafa (ohatra, ny boaty iray dia azo avadika andalana).
Tags: saasMalagasy famolavolanafitaovana famolavolana tranonkalawireframefitaovana wireframewireframingfitaovana fanaovana tariby